Gaa na Mgbọrọgwụ | Buddhatrends Logo
Akụkụ buru ibu nke ịmepụta ika bụ usoro nke ịmepụta logo nke ga-anọchite anya ụkpụrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ. Tinyere aha ya onwe ya, logo kwesiri ikwu akuko. Akụkọ nke a ga-echeta ngwa ngwa ma jikọọ ya na obere ihe osise dị mfe ma dị mkpa nke ihe niile ị chọrọ ikwu. Mgbe ọtụtụ ihe na aro dị iche iche site n'aka ndị ahịa anyị hụrụ n'anya, anyị kpebiri na "ịlaghachi azụ" bụ ụzọ kachasị mma iji gaa n'ihu dịka ika ma nwee ọganihu n'ọdịnihu.
Ebe ọ bụ na e kere anyị akara, anyị na-achọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ma chọọ ịmepụta ihe pụrụ iche maka ụmụ nwanyị niile nọ n'ebe ahụ. Mgbanwe nke ya na mgbakwasị nke Buddhatrends bụ ebe a iji gosipụta mmalite ọhụrụ. Dị ka phoenix na-esi na ntụ apụta, n'otu ụzọ ahụ, anyị na-ahọrọ iji weghachite aha mbụ ahụ.
Na agba aja aja na agba mmanụ, ọ bụ ngwakọta zuru oke nke ọṅụ, ọkụ, nku ọkụ, na ịnụ ọkụ n'obi mekọrịtara n'ụzọ zuru oke na agba nke ụwa, osisi, ịdị mma, na nkwụsi ike. Ụcha bụ ụzọ zuru oke iji gosipụta akụkọ ahụ na anyị na-agbalị ịgwa ndị uwe anyị na-enye.
Anyị chọkwara iji ohere a na-ekele gị maka ntụkwasị obi, nkwado na azụmahịa ọma.
N'ihe ndekọ a, anyị chọrọ ka udo, ịhụnanya, na obi ụtọ.